Dhageyso:- Itoobiya oo Ciidamo tiro badan Geesay Buulabarde+Sababta | Curubo.com	Thursday, July 20th, 2017	Home
Dhageyso:- Itoobiya oo Ciidamo tiro badan Geesay Buulabarde+Sababta
Jan 5, 2015 - Comments off	Wararka ka imaanaya Degmada Buulabarde ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Gudaha degmadaasi lagu Arkay Ciidamo Itoobiyaan ah oo aad u badan kuwaas oo Magaalada la keenay.
Wararka ayaa sheegay in Ciidamadaasi la keenay Degmada Buulabarde loo keenay in ay Gudbiyaan gargaar Degmada la keeyay islamarkaana la doonayo in la geeyo Degmooyinka Maxaas iyo Ceelbuur oo ka kala tirsan Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Duqa Degmada Buulabarde Cismaan Geedi oo la hadlay warfidiyeenada u ayaa sheegay in Ciidamada Itoobiyanka ah ee qeybta ka ah AMISOM ay yihiin kuwa loogu Talo galay in ay gargaarka la geenayo Ceelbuur iyo Maxaas ay galbiyaan.
Cismaan Geedi ayaa sidoo kale sheegay in Gargaarka loo qeybinayo Dadka ku nool Degmada iyo Tuulooyinka hoosyimaada islamarkaana sida ay ukala daran yihiin loo gaarsiin doono.
Halkaan Hoose ka dhageyso Warbixin Kooban